Kozio ahy du 31 janvier 2020: Tsy toko tsy forohana - Studio Sifaka - Actu, musique, conseils et débats pour les jeunes à Madagascar
Ny teny hoe "Tsy toko tsy forohana" no entin'i Princia amintsika ato anatin'ny Kozio ahy.
Re eny amin'ny haino aman-jery matetika ny hoe "tsy toko tsy forohana". Inona no tena dikan'io fomba fiteny io ? Mitovy amin'ny fiheverantsika azy ve? Mamaly izay fanontaniana izay i Ranjatohery Harilala, akademisiana.